Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiwali Gaas, oo dib ugu noqonaya noloshiisii hore – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiwali Gaas, oo dib ugu noqonaya noloshiisii hore
Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), ayaa la filayaa inuu maanta bilaabo siduu dib ugu noqon lahaa dalka Mareykanka, oo ah meeshii uu ku noolaa ka hor inta uusan kusoo biirin siyaasadda Soomaaliya. Magaalada Neyroobi ee dalka Kenya ayuu sii mari doonaa, halkaas oo uu uga sii gudbi doono Ameerika.
Gaas waxaa xalay xaflad sagootin ahayd, oo ay soo agaasimeen xubno u badnaa Golihiisii Wasiirada intii uu xilka hayey, loogu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta Dowlad Goboleedka Puntland. Waxaa lagu bogaadiyey inuu sameeyey hogaamin wanaagsan shantii sano ee uu Puntland u ahaa Madaxweynaha.
Hadaljeedintiisii xafladdaas xalay loogu qabtay Garoowe, Gaas, waxaa ku jirtay inuu dib ugu noqon doono noloshiisii shaqsiga ahayd ee hore, waxa uuna mar kale ku celiyey inuu dalbanayo in Soomaalida oo dhan, gaar ahaan Reer Puntland ay cafiyaan, isaguna uu cid kasta cafiyey.
Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), waxa uu markiisii ugu horeysay 2010-kii kasoo dhex muuqday Golihii Wasiirada ee Xukumaddii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo markaas ahaa Reysal Wasaaraha Soomaaliya, waxa uuna, markii uu Farmaajo xilkaas iska casilay, Gaas noqday Reysal Wasaaraha Soomaaliya, iyada oo, markii ay xukumaddiisu dhameysatay waqtigeeda, uu Puntland ka noqday Madaxwryne intii u dhaxeysay 2014 ilaa todobaadka hore ee bishii Janaayo, 2019.
Xasan Sheekh Maxamuud: Haddii la soo saaro shidaal waa nala dhacaa ama waan ku dirireynaa